Mangina Tamin’ny Fipoahana Nahafatesan’Olona Tao Qingdao Ny Fampahalalam-baovao Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2013 21:56 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Esperanto , Español, English
Namoaka ny gazety marainan'i Qingdao tao amin'ny Weibo i “Baigu Lunjin” ary nitsikera [zh] hoe:
Raha tokony hilaza ny marina mikasika ny loza, nanjary sehatra nandokafana ireo “manampahefana ambony” ny kaonty ofisialin'i Qingdao ao amin'ny Weibo. Tamin'ny 24 Novambra, hoy izy namoaka [zh]:
Notsiratsirain'ireo mpiserasera ny tatitra, miaraka amin'ilay mpisera manokana “CE sir”, nanoratra [zh] hoe:
Namaly ny voina ny loharanom-baovao ivelan'i Qingdao, nahitana ny Vaovaon'i Beijing nametraka fanontaniana [zh] momba ny fipoahana:
Olo-malaza ao amin'ny aterineto “Pretendtobein NY” nanoratra [zh] hoe:
Maro tamin'ireo media no sahirana nanoratra vaovao amin'ny lafiny tsara mikasika ny loza tamin'ireo andro ireo, izay mampahatsiahy ahy ilay fifandonam-piarandalamby tao Wenzhou. Fito andro taorian'ny loza, noraràna ny fitantaran'ny media momba izany. “Orana mikija mandritra ny fito andro, andro iray ho an'ny fampitandremana roa” no lohatenim-baovao nisongadina tao amin'ny Vaovaon'ny Beijing tamin'izany andro izany. Milaza sompirana ny fito andron'ny olona maty ny “fito” notononina voalohany, ny farany kosa milaza sompirana ny fampitandremana amin'ny fandraràna ny media. Hoy ny gazety mpivoaka isan'andro Oriental Sports nanoratra: “Afaka manakombom-bava ianao fa tsy afa-manakombona ny alahelo.” Mbola hisy hatrany ny sivana, saingy ny tena toetran'ny media indray ny mahita hatrany ny fomba hanehoany hatrany ny herimpo sy ny fahatsiarovan-tenany.
Mpanoratra Tianyou nanoro-hevitra [zh] hoe: